WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Gaas oo damacsan inuu faro galin xoogan ku sameeyo murashixiinta Puntland kasoo jeeda iyo murashixiinta oo horey uga digay socdaalka Gaas ee Muqdisho. – Puntland News
Home 2017 February 6 Somali News WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Gaas oo damacsan inuu faro galin xoogan ku sameeyo murashixiinta Puntland kasoo jeeda iyo murashixiinta oo horey uga digay socdaalka Gaas ee Muqdisho.
WAR DEG DEG AH: Madaxweyne Gaas oo damacsan inuu faro galin xoogan ku sameeyo murashixiinta Puntland kasoo jeeda iyo murashixiinta oo horey uga digay socdaalka Gaas ee Muqdisho.
February 6, 2017 · by	Mohamed Sheikh · 0
Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay Puntladnews ayaa sheegaya in madaxweyne Gaas uu faro gelin ku sameyndoono olalaha qaar kamid ah murashixiinta madaxtinimada Soomaaliya ee kasoo jeeda Puntland, si uu taageero ugu helo saaxiibkiis Cumar Cabdirashiid oo ay xaaladu ku xun tahay.
Madaxweyne Gaas ayaa iskudayaya inuu Cumar Cabdirashiid usoo celiyo xildhibaano badan oo ka goostay, kuwaas oo u kala hayaamay murashixiinta kale oo uu Faroole kamid yahay.
Sargaal katirsan dowladda Puntland ah oo si dhow ula socda arrimaha doorashada ayaa Puntlandnews u sheegay in socdaalka Gaas uu dhalin karo khilaaf xoogan oo kala dhimasho ah oo dhex abuurmi kara murashixiinta kasoo jeeda Puntland ee uwada tartamaya xilka madaxtinimada Soomaaliya.
“Anigu waxaan qabaa madaxweyne Gaas safarka uu ku yimid Muqdisho inuusan ka fiirsan saameynta iyo cirib dambeedka uu dhalinkaro, waayo waxay umuuqanaysaa inuu halkaan u yimid inuu la safto musharax gaar ah oo Puntland kasoo jeeda wayna iska cadahay, taasna waxay dhalin kartaa khilaaf iyo nacayb Puntland dhexdeeda ah. hadduuba cid taageerayo waxaa ila haboonaan lahayd inuu halkiisa kasoo taageero, ” ayuu yiri sargaalkaan.
Todobaadkii lasoo dhaafay socdaalka madaxweyne Gaas ayaa aad looga hadal hayay magaalada Muqdisho, waxaana nagu maqaallo ah in murashixiinta Puntland kasoo jeeda intooda badan ay cambaareeyeen socdaalka Gaas, iyagoo fahamsan ujeedada uu Muqdisho u imaanayo iyo faro gelinta uu damacsan yahay.